सामुदायिक समाचार नेटवर्क - News Detail - सरेश नेपाल भन्छन्ः कुर्सी मोहमा लिप्त भएर नेतृत्वको झिनाझम्टी नगरौं
न्युज अरनिको, बलेफी । Monday 10-Aug-2020 09:16 PM
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरकलहले अझै निकास पाएको छैन । सम्वादको परिस्थिति क्षीण हुँदैछ तर चुँडिसकेको छैन । के अब नेकपा फुट्छ त ? फुट्न पनि नसक्ने जुटी पनि नहाल्ने हो त ? वा दुवै पक्षको हित हुने गरी पदीय भागबण्डामा अस्थाई ‘युद्वबिराम’ हुन्छ ? के हुन्छ अब ?भन्ने जिज्ञासाले राजनीतिक बजार तताएको छ यतिबेला ।
ग्याङ अफ फोर -प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ_ले आयोजना गरेको बिबादास्पद पत्रकार भेलामा जस्तोसुकै खराव भन्दा खराव परस्थितिको लागि पनि तयार हुन र पार्टीभित्रको बिबादलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न आव्हान गरेकै कारणले पनि यो पक्ष आफ्नो बचाउमा केन्द्रित छ भन्ने शन्देश गयो । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिधिवत जग बसाल्ने काम भयो । स्वंय अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई बाँकी ३ जना नेताहरुले साथ दिएर सृजना गरिएको यो ‘रडाको’ को निकास निकाल्न जति ढिला गर्यो, त्यति नै नेकपा कमजोर हुने निश्चितप्रायः छ । यतिबेला गल्ती कसको र पछि हट्नु पर्ने कसले भन्ने प्रश्न पार्टीका आम कार्यकर्ताको मनमा उठिरहेको छ । बैठकमा एजेण्डै नभएको बिषय एकाएक उठाएर पार्टीलाई बिभाजनको डिलसम्म किन पुर्याईयो भन्ने प्रश्न त छँदैछ । त्यसमाथि पनि पटक पटक खराव भन्दा खराव परिस्थितिको निम्ति तयार हुनु भनेको के ?पार्टी बिभाजनको लागि लागौ भनेको हैन र ?
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने कामको नेतृत्व लिदा छिमेकी भारत रिसाउनु स्वभाबिक होला, त्यसको अगुवाई गर्दै भारतीय मिडियाबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने धम्की आईरहँदा त्यसैमा पछि लाग्नु पर्ने र यो राजिनामा मैले मागेको हुँ भनेर पारीपट्टीको जिम्मा लिने काम झुक्किएर, आबेगमा वा असावधानीबाट मात्रै भएको हो जस्तो लाग्दैन । छिमेकी मुलुकको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने उसको बिगत बुझेकाहरुले पत्याउन पनि सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा बोलेका कुरा अस्वभाबिक लागे प्रष्ट पार्न वा ती अभिब्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? दुबै पदबाट राजिनामा माग्ने नै टुँगोमा ‘ग्याङ् अफ फोर’ किन पुग्यो ?भन्ने कुराको बिश्लेषण गर्ने नै हो भने त्यो भारतीय चाहाना भन्दा बाहिर गएर निस्कर्ष निस्किदैन । किनकि सरकार र पार्टी असफल भयो, ओली कमरेडले चलाउन सक्नु भएन भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सृङ्खलावद्व अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका केही आधारहरु यहाँ उल्लेख गर्ने अनुमति चाहान्छु ।
लकडाउनको घोषणा हुनुभन्दा तीन महिना अघि कमरेड ओली एपेण्डीसाइटिसको अप्रेशनमा रहँदा कमरेड प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटीको चौथो बैठकको निर्णय पुस १० मा अपानि ३ मार्फत जारी भएको थियो । उक्त बैठकको निर्णय ९-ङ_ मा भनिएकोछ– सरकारले अनेकौ जटिलता, चुनौती र प्रतिकुलताका बावजुद संबिधान कार्यान्वयन, बिकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक बृद्वि र बैदेशिक सम्बन्ध बिस्तार जस्ता मुलभुत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हाँसिल गरेको छ ।’ उक्त निर्णयमा सरकारको मुक्तकण्ठले उच्च मुल्याङ्कन गरेको मसी सुक्न नपाउँदै लकडाउन शुरु हुनु र यसबीचमा राष्ट्र, जनता र पार्टीबिरुद्व आक्षेप प्रमाणित हुने कुनै काम नगरेको पनि सर्बबितदितै छ । नयाँ नक्सा जारी र अंगिकृत नागरिता सम्बन्धिको ऐन संसोधन ले सरकारको लोकप्रियता बढाएकै थियो । यसबीच सरकारले कुन त्यस्तो निर्णय लियो र सरकार एकाएक, रातारात असफल भयो ?ठोस र मुर्त आरोप ‘ग्याङ् अफ फोर’ ले लगाउन सकेका छैनन ।
कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अघि आफू निकटका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पथ्र्यो । यो उहाँको नैतिक र राजनीतिक संस्कार पनि ठानिन्थ्यो । त्यसतर्फ पनि उहाँ जान चाहनु भएन ।
कमरेड प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनु भएपछि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम सबै थाँती बसेका छन । बिभागहरु नचल्नु, आयोगहरुले पुर्णता नपाउनु, पार्टी सदस्यता एकीकृत गर्ने बिधानको ब्यबस्थाको उलंघन हुनु त थोरै उदाहरण हुन । जनसंगठन, जिल्ला नेतृत्व, प्रदेश संगठन कमिटीमा देखापरेका सामान्य असमझदारी समेत हटाउने प्रयासहरु समेत हुँदैनन । । के यी सबै काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नु पर्ने हो ?
मुलुकभित्र मात्र हैन, सिंगो बिश्वजगत कोरोना महामारीबाट पीडित छ । जनता आतंकित छन । बाढी पहिरो र डुवानले झन भयावह समस्या निम्त्याएको छ । यस्तोबेला सरकार र पार्टी जनतामा जाने र उच्च सकृयताको प्रदर्शन गर्नु पर्ने हो । तर पार्टीलाई बिबादको भुमरिमा फसाउने, काम गर्न नसक्ने बाताबरण बनाउने षडयन्त्र भैरहेको छ । अझ अघि बढेर ४ सय ५० जनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन १५२ जनाको हस्ताक्षर समेत बुझाइएको छ । यस्ता काम जिम्मेवार नेतृत्वले गर्न सुहाउदैन ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको नेतृत्वमा अधिकांश नेकपाका जनप्रतिनिधि भएको, जनताले स्थिरता, शुशासन र समृद्धीका लागि यो पार्टी रोजेको र इतिहासमै नेकपाले यति ठूलो अवसर पहिलो चोटी प्राप्त गरेको स्थितिमा जनताको बिश्वास र भावनामा चोट पार्ने काम कही कतैबाट हुनुलाई इतिहाँसकै गम्भीर अपराधको रुपमा सर्बसाधारणले लिने कुरालाई अस्थिरताका पक्षधरहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।अहिले नेकपा गम्भीर मोडमा छ । सरकार बिशिष्ट परिस्थिति र संक्रमणकालले सृजना गरेको भिन्न तर जटिल अवस्थामा छ । बिगतका ब्यक्ति मात्रै फेरिएको सरकार हैन यो । यसले सर्भिस डेलिभरी (सेवा प्रवाह) र परम्परागत बिकासे ढाँचामा मात्रैमा रमाउने छुट पाँउदैन । नेपाली समाज र राजनीतिलाई गुणात्मक परिबर्तन गर्नुपर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी पनि यही सरकारको काँधमा छ । यदी यो पार्टीलाई दुईटै वा दुईमध्य एक पद नपाकै कारणले फुटाईयो भने नेपाली जनताले के ठान्छन भन्नेतर्फ पनि सोचौं ।
यो खाली ठाउँमा आउने शक्ति भनेको लोकतान्त्रिक, देशभक्त शक्ति नहुने संभावना प्रबल देखिन्छ । ठूला बिद्रोह हाँकेका पार्टी र नेतृत्व असफल हुनु भनेको जनताको शक्ति, संगठन, सपना सबै असफल हुनु हो । एकीकरणका जटिल प्रकृयालाई निश्कर्षमा नपुर्याई बीचैमा अलपत्र छोडेको र कुर्सी नपाएकै कारण यो बितण्डता देखाएको आरोप पनि राजीनामा माग्ने नेता कमरेडहरुले नै ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो कुर्सी मोहमा लिप्त भएर नेतृत्वको झिनाझिम्टी नगरौं, नेपालको जीतमा रमाउन सिकौं, बिदेशीको भक्त नबनौं भन्ने कुरामा ध्यान दिऔं ।